Madaxda Beesha caalamka oo cabaareysay weerarkii ka dhacay dalka New Zealand – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaMadaxda Beesha caalamka oo cabaareysay weerarkii ka dhacay dalka New Zealand
Hiiraan Xog, Caro xoog leh iyo camnbaareyn ayaa ka dhalatay weerar nin hubeysan uu ku qaaday Labo Masaajid oo ku yaalla magaalada Christchurch ee dalka New Zealand kaasoo lagu dilay ugu yaraan 49 qof, iyadoo weerarkan argagax iyo carro lama filaan ah uu ka abuuray dunida.
Madax fara badan oo caalamka ka tirsan ayaa si kulul uga hadlay weerarkan, iyadoo madaxweynaha Maraykanka Trump uu illaa aamusan yahay.
“Waa ay caddahay in tani lagu qeexi karo oo kaliya weerar argagixiso” waxaa sidaas tiri ra’iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern, oo ku qeexday mid ka mid ah maalmihii ugu madoobaa New Zealand.
Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin ayaa isna yiri “Weerar ka dhan ah dad si nabdoon isugu yimid inay tukadaan waa naxdin ay ku dheehan tahay xaasidnimo iyo wuxuushnimo:”
Madaxweynaha golaha Midowga Yurub, Donald Tusk ayaa isna yiri “War naxdin leh ayaa caawa kasoo yeeray New Zealand, weerarkan arxan darrada ah marnaba ma tirtiri doono dulqaadka iyo akhlaaqda ay New Zealand ay caanka ku tahay”
Ra’iisul wasaaraha Spain, Pedro Sanchez ayaa sheegay in qalbigiisu la jiro dhibanayaasha qoyska iyo dowladda New Zealand, wuxuuna yiri “Xagjiriinta iyo kuwa mayalka adag, waxay doonayaan inay burburiyaan bulshadeena”.
Malaysiaayaa sheegtay in labo muwaadin ay kaga dhaawac meen weerarka. Wasaaradda arrimaha Dibadda ayaa sheegtay in ay cambaaraynayso “weerarkan macno la’aanta ah ee argagixisadu ku qaaday dadka aan waxba galabsan ee shacabka ah, ayna rajaynayso in sharciga la hor keeno dadkii falkaas foosha xun ka dambeeyay”.